चिकन अला किंग R रोटिसरी चिकनको साथ} - व्यंजनहरु
तपाईं एक crockpot मा goulash बनाउन सक्नुहुन्छ
क्र्याकर ब्यारेल क्रोक पट ह्यास ब्राउन क्यासरोल
कसरी गोमांस भिडियो बनाइएको छ
टर्की भाँडा पाई crock पटा नुस्खा
चिकन अला राजा
यो छिटो -० मिनेटको खाना मात्र हैन सुपर सजिलो, तर चिकन अला किंग पनि स्वादिष्ट छ!
यो एक स्वादिष्ट चिकन डिश हो, ताजा शाकाहारीसँग एक धनी र क्रीमयुक्त सॉसमा सिमर्ड गरिएको! यो संग सेवा चामल वा अधिक बिस्कुट ।
के तपाईं बन्दकोबीको टाउको स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ?
किन हामी यो रेसिपी प्रेम गर्दछौं
द्रुत: यस नुस्खाले put० मिनेट मात्र लिन सक्दछ, समाप्त गर्न सुरू गर्नुहोस्।
Rotisserie कुखुरा वास्तवमै यस डिशको सादगीमा थप गर्दछ, यो व्यस्त हप्ता रातको लागि वा भीडलाई खुवाउनको लागि ठूलो छ! Substutute बचेको ह्याम वा टर्की यदि यो तपाईंसँग हातमा छ भने।
यो मिश्रण: चिकन अला राजा बहुमुखी छन्। यो परम्परागत रूपमा पफ पेस्ट्री पेस गोला वा सँगै परोहन्छ बिस्कुट , तर तपाईं यसलाई चावल, अण्डा नूडल्स वा पकाइएको आलु मार्फत पनि सेवा दिन सक्नुहुन्छ!
तत्काल भाँडो मा प्राकृतिक रिलीज के हो
यस थालमा मशरूम र मटर छ तर केहि थप र color र स्वादको लागि, तपाईंसँग कुनै पनि अतिरिक्त शाकाहरू थप्नुहोस्!
सबै भन्दा राम्रो चिकन Ala राजा सामग्री को ताजा प्रयोग गर्दछ!
चिकन क्रेडेड रोटिसरी कुखुराले यो नुस्खा यति सरल बनाउँदछ, तर तपाईसँग हातमा भएको कुनै पनि कुखुरा प्रयोग गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। केवल यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो सासमा नडराउनु भन्दा पहिले पकाइसकेको छ!
VEGGIES मैले यस रेसिपीमा ताजा मशरूम, प्याज, मटर, र पिमिटो प्रयोग गर्‍यो तर कुनै पनि भेजीले स्वाद पाउनेछ! रंगीन मरिच, मकै, गाजर वा ब्रोकोलीले यस थाल पप बनाउनेछ!
SAUCE रिच र क्रीमी सॉस चिकन स्टक, मौसमीकरण, र क्रीमको साथ बनेको यो डिशको सबै भन्दा राम्रो अंश हो!
कसरी चिकन अला राजा बनाउन
यो नुस्खा बनाउन को लागी एकदम सजिलो छ, र यति चाँडै सँगै आउँछ!
बचेको पोखिएको गोमांस र गोभी क्यासरोल
मटरमा मशरूम र प्याज माटो राख्नुहोस्।
मौसमी (प्रति नुस्खा तल) र आटा थप्नुहोस्।
कुखुराको स्टॉक र क्रीममा ह्वास्क।
मटर, पिमिटो र कुखुरा मा चलाउनुहोस्।
माथि सेवा गर्नुहोस् ताजा बिस्कुट र संगै भुनी हरियो सिमी वा ओभन-भुने शतावरी !
उत्तम चिकन आला किंग को लागी सल्लाह
पास्टा थप्नु अघि कुखुरा पकाउन निश्चित गर्नुहोस् यदि तपाईं रोटेसरि कुखुरा प्रयोग गर्नुहुन्न भने।
कुखुराको छाती , कुखुराको फिला वा टुना सबै महान प्रतिस्थापनहरू हुन्!
चामल, पास्ता, वा रोटी बिना चिकन अला किंग फ्रिज गर्नुहोस् किनकि ती चीजहरू सॉसको साथ राम्रोसँग स्थिर हुँदैन। यसको सट्टामा, चिकन अला किंग लाई zippered झोला वा एक एअरट्याट कन्टेनरमा फाँट गर्नुहोस् जुन मितिमा र फ्ल्याट स्थिर गर्नुहोस्।
माइक्रोवेभमा वा स्टोभटपमा पुनः गरम गर्नुहोस्। स्वाद ताजा गर्नुहोस् नुन र काली मिर्च को एक सानो ड्यास थपेर र नयाँ चावल, पास्ता, वा ताजा रोटी फेरि सेवा बनाउन!
अन्य स्वादिष्ट चिकन पकवान
क्रीमी टमाटर चिकन पास्ता - एक भाँडाको थाल
चिकन अल्फ्रेडो बेक - एक परिवार मनपर्ने!
भुनी रोजमेरी कुखुरा - बनाउन सजिलो!
कुखुरा हन्टर - ताजा सामग्री
कुखुरा च्याउ मसरूम क्यासरोल - स्वादिष्ट आराम - खाना
के तपाईंले यो कुखुरा अला राजा बनाउनु भयो? निश्चित गर्नुहोस् रेटिंग र कमेन्ट तल छोड्नुहोस्!
तयारी समय१० मिनेट कुक समयबीस मिनेट कुल समय० मिनेट सर्भिंगहरू। लेखकहोली निल्सन यो क्रीमयुक्त चिकन अला किंग तैयार गर्न 30० मिनेट मात्र लाग्छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢½ कप मक्खन अनसोल्ट
▢। औन्स सेतो मशरूम काटियो
▢१ सानो पहेंलो प्याज पासा
▢½ चम्मच लसुन पाउडर
▢½ चम्मच काली मिर्च
▢½ चम्मच कोशेर नुन
▢½ कप पीठो
▢दुई कप कुखुराको स्टक
▢१ कप आधा - आधा
▢१ कप सानो गोठो मटर
▢½ कप तातो खुर्सानी सुक्खा र काटियो
▢3 कप रोटिसरी कुखुरा काटिएको
एक ठूलो उच्च पक्षमा १२ इन्च स्किलेटमा माखन थप गर्नुहोस् र मध्यम-उच्च तातो सेट गर्नुहोस्।
जब माखन पग्लिन्छ, मशरूम र प्याज नरम नभएसम्म,5मिनेट सम्म साट्नुहोस्।
लसुन पाउडर, कालो मिर्च, र कोशर नुनको साथ सिजन।
पीठोमा छर्कनुहोस् र पेस्ट बन्न नभएसम्म चलाउनुहोस्।
हिलाउँदा, बिस्तारै कुखुराको स्टकमा र आधा र आधामा हाल्नुहोस्। आधा को कुनै भाग रहन छैन सुनिश्चित गर्न को लागी चलाउनुहोस्।
तातो कम र सास गाढा नहुँदा सम्म चलाउनुहोस्, लगभग minutes मिनेट।
मटर, काटिएको पिमिटो र रोटेसरि कुखुरामा हिलाउनुहोस्।
पास्ता, चामल, वा बिस्कुटहरूमा सेवा गर्नुहोस्।
यदि कुखुराको छाती वा फिला प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई सॉसमा थप्नु अघि पकाउँनुहोस्। एक एयरटाइट कन्टेनरमा फ्रिजमा २- days दिन सम्म स्टोर गर्नुहोस्। माइक्रोवेभमा वा स्टोभटपमा पुनः गरम गर्नुहोस्। स्वाद ताजा गर्न नुन र काली मिर्च जोड्नुहोस् र नयाँ चावल वा पास्ता मा सेवा। फ्रिज गर्नका लागि, चिकन अला किंग लाई zippered झोला वा एक एयरट्याट कन्टेनरमा डेल राख्नुहोस् र फ्ल्याट स्थिर गर्नुहोस्। माथिको चरणहरू प्रयोग गरेर थाल्नुहोस् र पुनः गरम गर्नुहोस्।
क्यालोरिज:8 438,कार्बोहाइड्रेट:२g,प्रोटिन:एघारg,मोटो:32g,पागलिएको बोसो:19g,कोलेस्ट्रॉल:। 87मिलीग्राम,सोडियम:9 9मिलीग्राम,पोटासियम:4 554मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:।g,भिटामिन ए:१383838IU,भिटामिन सी:38मिलीग्राम,क्यालसियम:। 87मिलीग्राम,फलाम:दुईमिलीग्राम
रिसोट्टोको साथ के मासु सेवा गर्ने
कीवर्डउत्तम कुखुरा अला राजा, उत्तम कुखुराको व्यंजनहरु, चिकन अला राजा, कसरी कुखुराको राजा बनाउन कोर्सकुखुरा, डिनर, एन्ट्री, मुख्य कोर्स पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।